Askari hore oo loo maxkamadeynayo inuu ISIS la dagaallamay - BBC News Somali
Askari hore oo loo maxkamadeynayo inuu ISIS la dagaallamay
Xigashada Sawirka, CHRISTOPHE PETIT TESSON / PA
Johan Cosar waxaa sawirkan laga qaaday 2015-kii, xilli uu ku sugnaa Suuriya
Johan Cosar, Suuriya uma uusan aadin inuu u dagaallamo kooxda isku magacowday dowladda islaamka ee ISIS, balse wuxuu halkaas u tagay inuu iyaga la dagaallamo. Hadda, ninkan oo horay uga tirsanaan jiray ciidanka milatariga Switzerland wuxuu maxkamadeyn ku wajahayaa gudaha dalkiisa.
Waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan inuu ku biiray ciidan ka dhisan dal kale iyo waliba inuu meel uga dhacay xeerka dowladda u yaalla ee ah inaan la garab istaagin cid kale iyo inuu ku xadgudbay amniga waddanka Switzerland.
Mr Cosar iskuma uusan dayin inuu qariyo wixii uu sameeyay aad ayuuna ugu faraxsan yahay falkaas.
"Sharcigu wuu mamnuucayaa in loo dagaallamo ciidan ajnabi ah, ciidankaas uu garab istaagay cidda ay yihiin lama sheegi karo", ayey tiri haweeney afhayeenad ah oo u hadashay Milatariga dalkaas.
Bangladesh: ISIS oo sheegatay qaraxyo dad ku dhinteen
"Mareykanka wuxuu Suuriya uga baxayaa Ruushka awgiis"
Ku xigeenkii Daacishta Soomaaliya oo la khaarajiyey
Muddo kaddib wa sidee xaalada magaalada Raqqa?
Mr Cosar wuxuu ku dhashay Switzerland, waana muwaadin heysta dhalashada dalkaas. Laakiin awooweyaashiis ayey qaarkood asal ahaan kasoo jeedeen Suuriya.
Qoyska uu ka dhashay Cosar ayaa sidoo kale waxay ka tirsan yihiin bulshada masiixiyiinta ah ee dalka Suuriya.
Ninkan oo 37 jir ah ayaa hadda wuxuu sheegay in markii hore uu Suuriya ugu safray si uu ugu shaqeeyo qaab wariyenimo madax bannaan ah, balse markii uu arkay in kooxaha hubeysan ee islaamiyiinta ah ay ku wajahan yihiin bulshooyinka masiixiyiinta, wuxuu dareemay in uusan u furneyn jid kale, inuu iyaga difaaco mooyee.
Wuxuu ka caawiyay bulshada iney ciidan sameystaan, isaguna wuu ku biiray, diyaarna wuxuu u noqday inuu la wadaago xirfadaha milatari ee uu ka soo bartay ciidanka Switzerland ee uu horay uga tirsanaan jiray.
Sidoo kale wuxuu baray sida hubka loo isticmaalo iyo sida dhufeysyada loo sameysto. Dhanka dagaalkana wuxuu hoggaamiye u ahaa inkabadan 500 oo nin.
Ku xadgudubka xeerka ku saabsan inaan cid kale la garab istaagin ee u yaalla dalka Switzerland
Markii uu dib ugu laabtay Switzerland, xabsiga ayaa loo taxaabay, dacwad ayaana lgu soo oogay.
Mr Cosar wuxuu isagoo dharka shacabka xiran kasoo hor muuqday Maxkamadda
Xeerka u yaalla milatariga Switzerland wuxuu dhigayaa in ay mamnuuc tahay in qof soo maray ama markaas ka tirsan milatariga uu ku biro ciidan ka dhisan dal kale, isagoo aan dowladdiisa fasax buuxa ka heysanin.
Waddanka Switzerland ayaa go'aansaday in uu dhexdhexaad ka ahaado amuuraha dunida, ciidankiisuna aysan meelna ka dagaallamin.
Dhawaanahan, ciidanka kaliya ee Switzerland ka jooga dibadda waa kuwa ilaalada u ah baadariga ugu weyn masiixiyiinta Pope Francis, ee ku sugan magaalada Rome ee caasimadda dalka Talyaaniga.